नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड मोबाइलमा कसरी काटिन्छ पैसा?
नेपाल लाइभ सोमबार, वैशाख ८, २०७७, १९:०८
काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड फोन सेवाको रकम भुक्तानीमा ग्राहक भ्रम पैदा भएको भन्दै बिलिङ प्रणालीबारे जानकारी गराएको छ। पोस्टपेड बिलिङमा ग्राहकले गरेको प्रत्येक कल बराबरको रकमलाई अनबिल्ड अमाउन्टका रुपमा लेखांकन गरिने र महिनाको अन्त्य (सामान्यतः अंग्रेजी महिनाको १५ तारिख)मा मात्र बिल तयार गरिने टेलिकमले जनाएको छ।
बिल तयार भइसकेको तर ग्राहकले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमलाई अनपेड बिल भनिन्छ। उदाहरणका लागि मार्च २२ मा ९८५१०००००० को अनपेड बिल १ हजार ४ सय २५ छ भन्नाले यस ग्राहकले मार्च १४ सम्म (फागुन महिना वा सोभन्दा अघि) को बिलमध्ये १ हजार ४ सय २५ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने बुझ्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ।
पोस्टपेड नम्बरको महिनाभरको प्रयोगको आधारमा महिनाको अन्त्यमा बिल तयार गरिने भएतापनि सिस्टमले हरेक कलपश्चात् उक्त कलबापत लाग्ने रकमको हिसाब हुने टेलिकमले जनाएको छ।
यसरी बिल तयार गर्न बाँकी रहेको तर ग्राहकले चालु महिनामा गरेको सेवा उपभोग गरेवापतको रकमलाई अनबिल्ड अमाउन्ट भनिन्छ। उदाहरणका लागि मार्च २२ सम्ममा ९८५१०००००० नम्बरको अनबिल्ड अमाउन्ट २ सय ४८ छ भन्नाले मार्च १५ (मार्च १४ सम्मको बिल तयार भए पश्चात्) भन्दापछि मार्च २२ सम्म उपभोग गरेको सेवावापत तिर्नुपर्ने रकम २ सय ४८ छ भन्नेर बुझनुपर्छ।
यस्तो महिनाभरको अनबिल्ड अमाउन्टका आधारमा चैत महिनाको अन्त्यमा (अप्रिल महिनाको १५ तारिख) प्रोसेसिङ गरी बिल तयार गरिने टेलिकमले जनाएको छ।
के हो ड्यू अमाउन्ट?
सेवा प्रयोग गरेवापत ग्राहकले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रकमलाई ड्यू अमाउन्ट भनिन्छ। ड्यू अमाउन्ट भनेको अनपेड बिल र अनबिल्ड अमाउन्टको योगफल हो। उदाहरणको लागि माथिको ९८५१०००००० नम्बरको ग्राहकको मार्च २२ का दिनमा ड्यू अमाउन्ट १ हजार ६ सय ७३ (१हजार ४ सय २५ र २ सय ४८) हुन्छ। आफ्नो यो सबै बिलिङ रकमको बारेमा जानकारी लिनका लागि *400# डायल गर्न सकिन्छ। यसरी कल गर्दा आउने एसएमएसमा देखिने अभाइलेबल क्रेडिट चाहिं अब ग्राहकले प्रयोग गर्न पाउने रकम हुने टेलिकमले जनाएको छ।
हाल नयाँ पोस्टपेड नम्बर लिंदा स्वामित्व करवापतको रकम ५००, भ्याटवापत ६५ र क्रेडिट लिमिट वापत ३८० रुपैयाँ गरी जम्मा ९४५ रुपैयाँ लाग्दछ । स्वामित्व कर र भ्याटवापतको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ भने ३८० रकम ग्राहकले सेवा प्रयोग गर्न पाउने गरी कायम रहने टेलिकमले जनाएको छ।
३ सय ८० रुपैयाँ नै ग्राहकको क्रेडिट लिमिट हो। नयाँ पोस्टपेड मोबाइल लिंदा लाग्ने शुल्कमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुँदै आएकोले विभिन्न ग्राहकको क्रेडिट लिमिट पनि फरक फरक हुने गर्दछ।
पोस्टपेड मोबाइलका लागि मासिक रुपमा न्यूनतम ३ सय ८३.०७ रुपैयाँ रेन्टल चार्ज तय गरिएको छ । यसको अर्थ ग्राहकले यो भन्दा थोरै रकमको सुविधा प्रयोग गरेपनि रु. ३८३.०७ तिर्नै पर्ने टेलिकमले जनाएको छ। यद्यपि कम्पनीले उपलब्ध गराएको कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) अफर वा अन्य विशेष अफर लिएका ग्राहकहरुको हकमा भने यो रकम फरक हुन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ।
पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले धेरै सुविधा उपयोग गर्ने भएकाले यो व्यवस्था पहिले देखि नै गरिएको हो । मासिक रुपमा यो भन्दा धेरै रकम प्रयोग गर्नेहरुले क्रेडिट लिमिट बढाउँदा राम्रो हुने टेलिकमको भनाइ छ।
यही रेन्टल रकमबाटै सामान्य रुपमा फोन गर्न, एसएमएस गर्न वा डाटा चलाउन पाइन्छ । तर पोस्टपेड प्याक बाहेक अन्य छुट्टै प्याक किन्दा थप पैसा तिर्नुपर्छ । पोस्टपेड प्याक लिनका लागि *1415*2# डायल गरी आफूलाई उपयुक्त प्याक खरिद गर्न सकिन टेलिकमले जनाएको छ।
साथै संचित रकम सकिएर कल गर्न रोकिएको पोस्टपेड नम्बरमा रिचार्ज गर्दा जम्मा भएको नेगेटिभ व्यालेन्स कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र व्यालेन्समा देखिन्ने टेलिकमको भनाइ छ। सेवा एकतर्फी भएको मोबाइलमा पहिल्यै किनेको प्याक बाँकी रहेछ भने त्यो प्याक चलाउन सकिंदैन र रिचार्ज गरी दुईतर्फी सेवा सुचारु भएपछि बाँकी रहेको प्याक पुनस् प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमको भनाइ छ।
सामान्यतः नेपाली महिनाको अन्त्य अर्थात् अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा बिल हिसाब गर्दा धेरै ग्राहक झुक्किने गरेको पाइएको टेलिकमले जनाएको छ। यो अवस्थामा महिनामा थोरै मात्र रकम प्रयोग गरेको भएपनि ३ सय ८३.०७ रुपैयाँ जोडेर त्यो महिनाको हिसाब हुने टेलिकमले ग्राहकलाई जानकारी गराएको छ।
मानौ कुनै ग्राहकले महिनामा १सय रुपैयाँमा मात्र प्रयोग गरेको भएपनि ३ सय ८३.०७ रुप्रैयाँ नै काटिन्छ र आफ्नो २ सय ८३.०७ रुपैयाँ कता हरायो भनी झुक्किने गरेको टेलिकमको भनाइ छ।
पोस्टपेड मोबाइल बिलको जानकारी लिनका लागि *400# डायल गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइटबाट र कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । कम्पनीको एपबाट पनि आफूले प्रयोग गरेको पछिल्लो ५ दिनसम्मको सबै बिलको रेकर्डसमेत हेर्न सकिने जानकारी टेलिकमले दिएको छ।